erayo sojidasho leh | shumis.net
Home » galmada » erayo sojidasho leh
erayo sojidasho leh
Maxa ku jira inaa naftada jeclaatid ka hor intaadan jeclaan qof kale?
Tan ugu horeysa oo lugu soo jiita ninka jeceshay waa inaad tusisaa adiga inaa tahay muhiimada kowaad, taas oo ku adag in niman badan fahmaan una badan kuwa jecel iney dumarkooda maamulid xad dhaaf ah ku hayan.
Nolashaada ka dhig mid muhiim ah adigoo xiriirka aadan u gooni yeeleyn ninka aad jeceshahay oo kaliya, isla markaasna niyada ku heynaya jaceylkaad u qabtid. Xusuusnow had iyo goor inaad nolol, asxaab, waalid, iyo walaalaba leedahay kaana doonayan waqti iyo xiriir gooni ah.
1. Asaga nolashada ku soo biiri
Kuligeen waa kala nolol iyo dabeecad duwanahay, xiriirkaga ha u ogalaan inuu ka gooni yeelo noloshaad (Qooyskaga iyo Asxaabtada) awal ku jirtay. Aamin naftaada marka hore kadib asaga kusoo biiri noloshada. Taasoo sameeysa waxey ku keyneysa farxad iyo inuu ku mashquulo nolosha aad ku nooshahay.
Hada dareentid ina xariirkinu ka muuqato firficooni la'aan ka imaneysa dhankaga, dhakisa, ama labadiinaba, waqti ka qaado. Ogow nimanku waa yaanyuurta (bisad, mukulaal) oo kale hadaa ka cararta waa kusoo ceersanayan hada bursatana wa ka cararayan.
3. Haka daba cararin
Maahmaah hore ayaa oraneysa 'Wax kastoo aad bursata waa cararaan'. Qofkaad jeceshay oo ka daba cararta waxey tusineysa inaadan naftaad qiimo laheyn. Hadaa is hubtid oodna jeceshahay naftaada waxba kuguma zaaidineyso qof aad ka daba carartaa oo aanan aheyn qiimo daro. Waqti sii, hadey suurto gal tahey xata inkir. Asaga is garanaya oo oganaya inaad qof waqti iyo fayignaan mudan tahay.
Ug dambeynti Nafsada oo hor marisa kana feejignaata waxayabaha aanan ku keeneynin farxad waa tan koowaad oo aad xiriir caafimaad qaba ku heshaa.
Title: erayo sojidasho leh